VICTORIEN JOSEPH ESOAEL : Lehilahy iray karohina fatratra, nangalatra vola 70 tapitrisa ariary
Lehilahy iray voalaza fa efa toy ny zanaka an-trano, monina eny Analamahitsy no fantatra tamin’ny angom-baovao omaly maraina fa tsy hita popoka niaraka amin’ny volabe nanomboka tamin’ny 27 marsa 2018 lasa teo iny. 11 avril 2018
Victorien Joseph Esoael na i Soaly no fiantsoana azy ary zanak’i Rasoarivelo Théonie Shela izy io rehefa nandeha ny fanadihadiana. Marihina moa fa fianakaviana no nipetrahany teto an-drenivohitra saingy izao nivadihany tamin’ny fotoana tsy nampoizina izao. Vola mitentina 70 tapitrisa ariary any ho any no nentiny nitsoaka raha ny voalazan’ireo fianakaviany, izay vola nangonina saika halefa any ivelany hanatanterahana fitsaboana olona tsy salama.
Nohamafisin’ireto fianakaviany hatrany fa efa nametrahana fitokisana tanteraka ity lehilahy ity tao an-tokantrano, hany ka tsy nisy niafina taminy ny zava-miseho rehetra. Akory anefa ny hatairan’ny rehetra raha toa ka tsy hita izay nalehany, niaraka tamin’io lelavola io rehefa tsy nisy olona tao an-trano. Tamin’ny fotoana nanaovana ny fitsirihana rehetra ihany koa dia voaporofo fa mbola tao avokoa ny fananany rehetra ary nahitana fanafody gasy sy fonosana rongony.
Hatreto aloha dia mbola eo am-pikarohana fatratra ity lehilahy ity ny rehetra ka misy ny fiaraha-miasa amin’ny Polisin’ny boriborintany fahavalo. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa ny ao ambadik’izao tranga izao. Andrasana ny fivoaran’ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao.